को हुन् भ्यादिमिर इल्यिच उल्यानोभ लेनिन ? - Left Review Online
१५०औँ लेनिन जयन्ती
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव पुष्पलाल र लेनिनको जीवनमा प्रेरेणाको हिसाबले समानता छ । जसरी गंगालालको हत्याले पुष्पलाललाई राजनीतिमा लाग्न प्रेरित गर्‍यो, त्यसैगरी लेनिनको दाजुको हत्याले उनलाई प्रेरित गर्‍यो ।
भ्यादिमिर इल्यिच उल्यानोभ लेनिन तत्कालीन सोभियत संघमा कार्ल मार्क्स र फ्रेडरिक एङ्गेल्सको मार्क्सवादी दर्शनको पहिलो व्यवहारिक प्रयोग गर्दै समाजवादी क्रान्ति गर्ने महान् क्रान्तिकारी, राजनीतिज्ञ तथा राजनीतिक सिद्धान्तकार हुन् । मार्क्सवादी दर्शन विश्वका सर्वाहारा मजदुर किसान तथा गरिवहरुको मुक्ति र संघर्षको कार्यक्रम हो र यसबाट मात्रै हामी वैज्ञानिक समाजवाद प्राप्त गर्न सक्दछौँ भन्ने कुरा लेनिनले सिद्ध गरे । मार्क्सवादी विचारधाराको व्यवहारिक र सृजनात्मक प्रयोग गर्ने क्रममा उनले मार्क्सवादमा थुप्रै आयामहरु विकास गरे र मार्क्सवादलाई समृद्ध गर्ने क्रममा थप विचार अघि सारे जसलाई हामी लेनिनवादको रुपमा चिन्दछौँ ।
लेनिनको जन्म २२ अप्रिल १८७० मा रुसको भोल्गा नदीको किनारमा रहेको सिम्बिस्र्क भन्ने स्थानमा भएको थियो । उनका पिताको नाम इल्या निकोलाएभिच उल्यानोभ र आमाको नाम मारिया अलेक्सान्द्रोभ्ना हो । लेनिनको परिवार मध्यमवर्गीय थियो । लेनिनका आमा र बुबा दुवै शिक्षित थिए ।
लेनिनका पिता त्यस समयका प्रगतिशील विचार राख्ने व्यक्ति थिए र उनले रुसी सर्वसाधारणका बिचमा शिक्षा प्रचार गर्ने, गाउँहरुमा स्कुल स्थापना गर्ने र भोल्गा तटवर्ती क्षेत्रहरुमा बस्ने गैररुसी जनजातिहरुको शिक्षादीक्षाका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान गरेका थिए । विभिन्न भाषाको ज्ञाता रहेकी उनकी आमा समेत उनको प्रेरणा र शिक्षाको महत्त्वपूर्ण स्रोत थिइन् । उनीहरुका आन्ना, अलेक्सान्दर, भ्लादिमिर, ओल्गा, दिमत्री र मारिया गरी ६ सन्तान थिए (८ मध्ये दुईको सानैमा मृत्यु)।
उल्यानोभ दम्पतिले आफ्ना सन्तानहरुलाई राम्रो शिक्षा दिए । यसका साथसाथै उनीहरुले आफ्ना सन्तानलाई अन्याय, अत्याचार, विभेद र शोषणको विरुद्ध संघर्ष गर्नुपर्छ भन्ने प्रतगीशील भावना जगाउन महत्वपूर्ण योगदान गरे । संयोग नै मान्नुपर्छ कि, उल्यानोभ दम्पतिका सबै छोराछोरी पछि गएर क्रान्तिकारी बने । ६ वर्षको उमेरमा बाप्टिज्म वा धार्मिक संस्कार गरेका लेनिन परिवारका तेस्रो सन्तान थिए । केटाकेटीमा उनको नाम भ्लादिमिर इल्यिच उल्यानोभ थियो । लेनिन भन्ने नाम पछि मात्र राखिएको थियो । उनी १५ वर्षको हुँदा उनको बाबुको मृत्यु भयो । तर आफ्नो दाजुको सहयोग र आफ्नो प्रतिभाका कारण लेनिनले राम्रो शिक्षा हासिल गर्न सफल भए ।
आफ्नो प्रतिभा र घरको वातावरणका कारण लेनिनले विद्यालय अघि नै पढ्न थालिसकेका थिए । पछि स्कुल सुरु गरेपछि कक्षामा सधैँ प्रथम हुन्थे । लेनिनले विद्यालयका साथै अन्य बाह्य कृतिहरु समेत अध्ययन गर्दथे । उनले विद्यालय उमेरमै प्रतिबन्धित बेलिन्स्की, गेर्चेन, चेर्निसेभ्स्की, द्रोब्रोल्युबोभ र पिसारेभजस्ता क्रान्तिकारी डेमोक्रेटहरुका कृतिहरु पढ्न भ्याइसकेका थिए । त्यसबेलाका महान् वैज्ञानिक र जारशाही तथा भूदास प्रथाका कडा विरोधी नेर्निसेभ्स्कीको ‘के गर्ने ?’ उपन्यासले उनलाई प्रभावित पारेको थियो ।
क्रान्तिमा लाग्ने प्रेरणा र सुरुवात्‌
लेनिन आफ्ना दाजु अलेक्जेन्डरको व्यक्तित्वबाट निकै प्रभावित थिए । लेनिनका दाजु अलेक्जेन्डर पिटस्वर्ग विश्वविद्यालयको विद्यार्थी छँदा जारशाहीविरुद्ध क्रान्तिकारी संघर्षमा सक्रिय रुपमा सहभागी हुन्थे । आफ्ना जेठा दाजुबाट नै लेनिनले मार्क्सवादी साहित्यको प्रारम्भिक ज्ञान हासिल गरेका थिए ।
लेनिनका पिताको निधनपछि परिवारले त्यो पीडा बिर्सन नपाउँदै मार्च १८८७ मा उनका दाजु अलेक्जेन्डर पिटर्स्वर्गमा गिरफ्तार भए । उनलाई तत्कालीन रुसी जारशाही शासक अलेक्जेन्डर तृतीयको हत्याको षडयन्त्रमा संलग्न भएको आरोपमा त्यसै वर्षको मे महिनामा स्लिसेल्बर्ग किल्लामा फाँसी दिइयो । त्यसले लेनिनलाई ठूलो चोट पुर्‍यायो । उनले आफ्नो सम्पूर्ण जीवन क्रान्तिकारी संघर्षमा लगाउने संकल्प गरे ।
क्रान्तिकारी कामका लागि आफूलाई तयार गर्दै किशोर लेनिनले सामाजिक विज्ञानहरुको गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरे । स्वर्ण पदकसहित जिम्नेसियमको आफ्नो अध्ययन सकेपश्चात् अगस्ट १८८७ मा उनी काजान विश्वविद्यालयको कानुन विभागमा भर्ना भए ।
विश्वविद्यालय र देश छोड्नुपर्ने वाध्यता
डिसेम्बर १८८७ मा अठार वर्षीय लेनिन जारशाहीविरुद्ध क्रान्तिकारी संघर्षमा होमिएका कारण विश्वविद्यालयबाट निष्कासित हुनुका साथै गिरफ्तार पनि भए । उनी काजान गुबेर्नियाको कोकुसकिनो गाउँमा निर्वासनमा पठाइए । तर एक वर्षको निर्वासनलाई उनले अध्ययनमा विताए ।
काजान बसाइकै क्रममा उनी रुसी मार्क्सवादी क्रान्तिकारी नि.ए. फेदोसेएफले गठन गरेको समूहको सदस्य बने । उनीबाटै प्रभावित भई लेनिनले पनि काजानमा मार्क्सवादको अध्ययन सुरु गरे ।
मे १८८९ तिर लेनिन आफ्नो परिवारसहित काजानबाट सामरा गुवेर्निया आए । उनले मार्क्सवादको साथै ल्याटिन ग्रीक, जर्मन, फ्रेन्च र अंग्रेजी भाषाको पनि अध्ययन गरे । यसै समयमा उनले मार्क्स र एंङ्गेल्सले संयुक्त रुपमा लेखेको महत्त्वपूर्ण कृति ‘कम्युनिस्ट घोषणापत्र’लाई जर्मन भाषाबाट रुसी भाषामा अनुवाद गरे ।
सन् १८९१ मा उनले पिटर्सवर्ग विश्वविद्यालयको कानुनमा प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण भए । त्यही क्रममा सन् १८९२ बाट लेनिनले सामराको जिल्ला अदालतमा वकालत गर्न सुरु गरे । उनी गरिब किसानहरुको पक्षमा वकालत गर्थे ।
सन् १८९२ मा लेनिनले सामरामा पहिलो मार्क्सवादी अध्ययन मण्डल खोले । युवा उमेरमै बोल्न प्रखर लेनिनमा अरुलाई आकर्षित गर्ने र नेतृत्व गर्ने क्षमता थियो र जब उनले मार्क्सवादको अध्ययन गरे र वकिल बने, उनको त्यो क्षमतामा निखारता आयो ।
पिटर्सबर्ग बसाइका क्रममा ठूलो स्फूर्ति र अभिलाषासहित लेनिन क्रान्तिकारी कार्यमा संलग्न भए । उनी क्रान्तिकारी मजदुरहरुको राजनीतिक पार्टी खोल्नतिर लागे ।
त्यही क्रममा सन् १८९५ मा लेनिनले पिटर्सवर्गका मार्क्सवादी अध्ययन मण्डलहरुलाई एउटै राजनीतिक संस्थाको रुपमा संगठित गरे । सन् १८९५ मा त्यस संघले पिटर्सबर्गका कपडा कारखानाहरुका मजदुरहरुको विख्यात हड्तालको नेतृत्व गर्यो । उक्त हड्तालमा ३० हजारभन्दा बढी मिल मजदुरहरुले भाग लिएका थिए । आन्दोलनका कारण भयभित भएको जारशाही सरकारले डिसेम्बर १८९५ मा लेनिनसहित संघका बहुसंख्यक कार्यककर्ताहरुलाइ गिरफ्तार गर्‍यो ।
लेनिनले पिटर्सवर्गको जेलको एकान्त कोठामा चौध महिनाको कठोर जीवन बिताए । जेलमा रहँदै उनले मार्क्सवादी पार्टीको पहिलो कार्यक्रमको मस्यौदा तयार पारे र यस कार्यक्रमको व्याख्या गरे । रोचक तथ्य यो छ कि लेनिन आफ्ना क्रान्तिकारी लेखहरु, किताब र पत्रिकाहरुका हरफहरुको बिचमा दुधले लेख्थे । यसरी लेखिएका अक्षरहरु देखिँदैनथे, तर कागज तताएपछि यी अक्षरहरु पढ्न सकिन्थ्यो ।
जेलमा रहँदै लेनिनले आफ्नो प्रख्यात कृति ‘रुसमा पूँजीवादको विकास’ लेख्न सुरु गरे । लेनिन जेलमा अनुशासनको कडा पालना, कडा परिश्रम र सुत्नुअगाडि नियमित रुपमा व्यायाम गर्थे । पिटर्सबर्गमा लेनिन मजदुरवर्गका नेता र संगठनकर्ताको रुपमा देखापरे । उनले क्रान्तिकारी आन्दोलनको सैद्धान्तिक व्याख्या गरे र रुसमा सर्वहारा पार्टी गठन गर्न जग तयार गरे ।
लेनिनको क्रान्तिकारी क्रियाकलापद्वारा त्रसित जारशाही सरकारले लेनिनलाई १३ फ्रेबुअरी १८९७ मा तीन वर्षका लागि पूर्वी साइबेरियामा गई बसोबास गर्नुपर्ने निर्वासनको सजायँ दियो । साइबेरियामा निर्वासीत जीवन बिताउँदै गर्दा पनि कडा अध्ययनका साथै लेनिनले जनतालाई संगठित र प्रशिक्षित गर्ने कार्यमा लागे । यसै समय रुसको क्रान्तिकारी आन्दोलनकी नेतृ क्रुप्स्कायासँग भेट भयो । उनीसँग आन्दोलनकै क्रममा लेनिनको यसअघि नै पिटर्सबर्गमा भेटघाट, चिनापर्ची र प्रेमसम्बन्ध भइसकको थियो । उनीहरुले साइबेरियामै विवाह पनि गरे ।
निर्वासनमै लेनिनले सन् १८९९ मा आफ्नो पुस्तक ‘रुसमा पुँजीवादको विकास’ पूरा गरे । यस कृतिमा रुसको आर्थिक विकासबारे गहन वैज्ञानिक अनुसन्धान गरिएको थियो । यो पुस्तक छिटै प्रगतिशील बुद्धिजीवी, विद्यार्थी र मजदुर अध्ययन मण्डलहरुमा फैलियो । त्यसै बेला मार्च १८९८ मा मिन्स्क सहरमा भएको रसियाली सामाजिक जनवादी मजदुर पार्टीको पहिलो महाधिवेशनमा पार्टी स्थापना भएको घोषणा गरियो ।
सन् १९०० मा उनी साइबेरियाबाट मुक्त भएपछि युरोप पुगे । जहाँ उनले लगभग १७ वर्ष बिताए । उनले त्यहाँ स्पार्क (ज्वाला) भन्ने रुसको प्रमुख पत्रिकाको सम्पादक मण्डलको रुपमा काम गरे । उनको प्रमुख कार्य समाजवादको वकालत गर्नु थियो । यस पत्रिकामार्फत् उनले कसरी पार्टी गठन गर्नुपर्छ कसरी आम जनसमूहहरुलाई पार्टी कामतर्फ आकर्षित गर्ने हो भन्नेबारे लेखहरु प्रकाशित गरे ।
सन् १९०१ देखि भ्लादिमिर इल्यिचले आफ्ना केही लेखहरु लेनिन नामबाट छपाउन थाले । ‘इस्क्रा’ पत्रिकामा काम गर्दागर्दै लेनिनले साइबेरियाली नदी लेनाबाट आफ्नो उपनाम राखेका थिए । सन् १९०२ मा लेनिनको कृति ‘के गर्ने’ प्रकाशित भयो । उक्त पुस्तकमा लेनिनले सर्वहारा मार्क्सवादी पार्टीको निर्माणसम्बन्धी विस्तृत योजना प्रस्तुत गरेका थिए । त्यस्तै किसानहरुलाई पार्टी कार्यक्रम कसरी बुझाउने बारेमा सन् १९०३ मा ‘गाउँका गरिबहरुलाई’ शीर्षकको लेख लेखे ।
लेनिनले तत्कालिन समयको बढ्दो उद्योग, शहर र श्रमिक वर्गको मात्र होइन रुसको ग्रामीण क्षेत्र र किसान समुदायमा कसरी मार्क्सवादलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने वैचारिक कार्यमा समेत लागे । उनको मूल उद्देश्य रुसमा कसरी प्रजातान्तिक गणतन्त्र स्थापना गर्न सकिन्छ भन्ने थियो ।
सन् १९०२ मा “के गर्ने” (ह्वाट सुड बी डन) भन्ने मतमा उनको विचार अन्य साथीहरुसँग सहमत भएन । त्यसले तत्कालीन मार्क्सवादीहरुमा दुई समूहको जन्म भयो । बोल्सेविक र मेन्सेविक । उनीहरु बिच कसरी संगठित गर्ने भन्नेमा मात्र होइन राजनीतिक समस्याको समाधान गर्ने कुरामा समेत विवाद रह्यो ।
सन् १९०५ मा रुसमा क्रान्तिको पहिलो उभार देखियो । स्वतस्फूर्त रुपमा श्रमिक, किसान, सैनिक आदीको प्रदर्शन र विरोधले स्वयम् बोल्सेविकलाई पनि चकित बनायो । यसले संवैधानिक सुधार गर्न सफल भयो । यसले रसियन समाजवादी प्रजातान्त्रिक पार्टीमा बोल्सेविक समूहलाई स्वतन्त्र पार्टीको रुपमा विकास गर्न सफल भयो । त्यसकारण लेनीनले १९०५ को क्रान्तिलाई अक्टोवर क्रान्तिको रिहर्सल भनेका छन् ।
सोभियत क्रान्तिको जग र सफलता
सन् १९१४ देखि सुरु भएको प्रथम विश्वयुद्धले बोल्सेविक आन्दोलनलाई मजबुत बनायो । शान्ति, जमिन र खाद्यान्न (पिस, ल्याण्ड र ब्रेड) को नारा लोकप्रिय बन्दै गयो । साथै उनले ‘सम्पूर्ण सत्ता सोभियतहरुलाई’ भन्नेजस्ता नाराहरु अघि सारे । उनले स्पष्ट पार्दै सोभियत क्रान्तिले मात्र आमजनतालाई शान्ति, किसानहरुलाई जमिन, भोकाहरुलाई रोटी दिन सक्छ भने ।
उनले बिर्ताहरु बिनामुआब्जा जफत गरिनुपर्छ, देशको समस्त जमिनको राष्ट्रियकरण हुनुपर्छ र सम्पूर्ण कलकारखाना सामाजिक उत्पादन तथा वाणिज्य व्यवस्थामाथि मजदुर नियन्त्रण कायम गर्ने प्रस्ताव राखे । यसै बिच लेनिनले महाधिवेशन डाकेर पार्टीको नाम बदलेर बोल्सेविकबाट कम्युनिस्ट पार्टी बनाए । लेनिनको नेतृत्वमा पार्टी केन्द्रीय समितिले विद्रोहको तयारी गर्दै देशभर सुनियोजित क्रियाकलाप सुरु गर्यो ।
लेनिनको नेतृत्वमा रुसी बोल्सेभिक पार्टीले सन् १९१७ मा रुसमा समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्यो । त्यो क्रान्तिले मार्क्सवादले परिकल्पना गरेको वैज्ञानिक समाजवादको स्थापना गर्ने प्रयत्न गर्यो । लेनिनले वैज्ञानिक समाजवादी राज्यसत्ताका लागि सर्वहारावर्गको अधिनायकत्वको नयाँ सिद्धान्त प्रतिपादन गरे ।
२४ अक्टोवरको दिन बेलुकिपख आफ्नो जीवनलाई खतरामा पार्दै पेट्रोग्राडका ती सुनसान सडक हुँदै लेनिन स्मोलिन आए र विद्रोहको प्रत्यक्ष नेतृत्व गर्न थाले । भोलिपल्ट २५ अक्टोबरमा पेट्रोग्रादका टेलिफोन, टेलिग्राफ तथा रेडियो स्टेसनका कार्यालयहरु, नेभा नदीका पुलहरु, रेल स्टेसन र राजधानीका अन्य मुख्यमुख्य अड्डामाथि विद्रोही मजदुर, सिपाही र नौसैनिकहरुले कब्जा गरे । त्यस्तै क्रान्तिकारी सेनाले आकस्मिक प्रहारद्वारा अस्थायी सरकारका मन्त्रीहरु बसेको शिशिरप्रासाद कब्जा गरे ।
त्यसपछि कम्युनिस्ट पार्टीले फेब्रुअरी क्रान्तिपछि गठित अस्थायी सरकारलाई अपदस्थ गरेको घोषणा गर्‍यो । र, लगत्तै लेनिनको नेतृत्वमा रुसमा सर्वहारावर्गको पहिलो सरकार गठन भयो, जसले समाजवादी शासन प्रणालीको स्थापना र विकासका लागि सर्वहारावर्गको अधिनायकत्व भएको समाजवादी राज्यसत्ताको सुरुवात गर्‍यो । यो क्रान्ति नै अक्टोबर क्रान्तिको रुपमा विश्वप्रसिद्ध छ ।
सन् १९१९ मा अमेरिकी, बेलायती र फ्रान्सेली सेनाहरुले मुर्मन्सर्क कब्जा गरे । यस प्रकारले साम्राज्यवादीहरुले सोभियत राष्ट्रविरुद्ध युद्ध सुरु गरे । अपदस्थ बिर्तावाल तथा पुँजीपति वर्गले विदेशी आक्रमणकारीहरुको सहायताद्वारा गृहयुद्ध सुरु गरे । कम्युनिस्ट पार्टी र सोभियत जनताले छाती फर्काएर मातृभूमिको रक्षा गरे । यसै क्रममा लेनिनको गोली हानी हत्या गर्ने प्रयास भयो ।
सन् १९१८ मा गोली लागेर भएको घाउ बल्झिन थालेकोले सन् १९२१ को जाडोदेखि डाक्टरहरुले उनलाई आराम र उपचारका लागि अनुरोध गरेका थिए । सन् १९२४ मा उनको स्वास्थ्य झन् बिग्रियो । आराम नलिई निरन्तर परिश्रममा लागेका कारणले उनको घाउ बल्झियो ।
सन् १९२४ जनवरी २१ मा बेलुकि छ बजेर ५० मिनेट जाँदा विश्व सर्वहारा आन्दोलनका महान् नेता र मार्क्सवादका सिर्जनात्मक प्रयोगकर्ता लेनिनको निधन भयो । त्यसै दिन राति सोभियत कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय समितिको आकस्मिक प्लेनम बस्यो । केन्द्रीय समतिले जनताको नाममा एक अपिल जारी गर्यो ।
कम्युनिस्ट इन्टरनेसनलका संस्थापक, विश्व साम्यवादका नेता, अन्तर्राष्ट्रिय सर्वहारावर्गको प्रेम र गौरव, रुसी सर्वहारा अधिनायकवादका अगुवाको चारदिनसम्म लाखौँ मजदुर तथा किसानहरुको भावपूर्ण श्रद्धाञ्जलीपछि २७ जनवरीको दिन दिउँसो ४ बजे अन्त्येष्टी जुलुस निस्क्यो । लेनिनको शव लालमैदानमा विशेष रुपमा बनाइएको समाधिमा राखियो । उनको मृत शरिर आज पनि लेनिनग्रादमा सुरक्षित छ ।
पछिल्लाे - समाजवादको आधार तयार गर्नु नेकपाको ऐतिहासिक कार्यभार हो – अध्यक्ष प्रचण्ड
अघिल्लाे - कोरोना महामारी र विश्व अर्थराजनीतिक परिदृष्यः एक टिप्पणी